कैलालीमा पनि आंशिक निषेधाज्ञा जारी, के गर्न पाउने के नपाउने ? –
कैलालीमा पनि आंशिक निषेधाज्ञा जारी, के गर्न पाउने के नपाउने ?
२०७७ चैत्र ११, बुधबार , ०५:१६ मा प्रकाशित
जिल्लाभर होलीमा भिडभाड रोक
धनगढी । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले कैलालीमा भेला हुन, जात्रा, पर्व, भीडभाड गर्न, महोत्सव, जुलुस, मेला लगाउनमा रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कैलाली जिल्लाभर होलीमा भिडभाड रोक लगाइएको हो ।
(यो समाचार धनगढी खबरबाट लिइएको हो)
Prevपछाडीटेलिकम सेवाबाट सेवाग्राहीलाई सास्ती
अगाडीसत्ती कर्णाली सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता लाभान्वितNext